Isivumelwano sezulu: ukweba abantu egqokeni elihle: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-29 Juni 2019	• 19 Amazwana
Kufanele nje uhleke ku- ubuchwepheshe abantu abaphangwa ngaphansi kwegama 'isivumelwano sezulu'. Inkulumo entsha ye-Orwellian ngokuyinhloko ikhethwe kahle. Yile ndlela okwenza ngayo: ,,Sizozama wonke umuntu ukuba ahlanganyele. Lokhu akusho ukuthi izinto ngeke zishintshe. Kodwa sineminyaka engu-30 yalezo zinguquko, isizukulwane. ''
Konke kuguqulwa ezindabeni ze-Orwellian. Izibonelo zalokhu yizivolontiya eziphoqelekile, umsebenzi wokuthula (ukuthumela amasosha empini), ukunakekelwa kwempilo yengqondo (ukuboshwa kanye nokuphathwa kwemithi) kanye nabanye abaningi. Kodwa lesi sisho futhi isitatimende esikhethekile se-Orwellian: "Sizoyenga wonke umuntu". Ngokwenza lokho lokho kusho ukuthi: 'Sizojezisa wonke umuntu ongahlanganyeli.
Sibona ukuthi kamuva ngokufanayo isihloko se-AD:
Kodwa inhloso yeSivumelwano Sokushintsha Kwesimo Sezulu ukukhipha ingxenye engaba yingxenye ye-CO2030 ku-2 eminyakeni eyishumi nanye kune-1990. Ngalokhu, iKhabhinethi izoletha uhlu lwezinyathelo, njengokunyuka kwentengo yegesi nokunciphisa kulowo kagesi. Kuzophinde kube nezinsizakalo nemali mboleko yezimpompi zokushisa nokufakwa kwezindlu.
Kodwa kahle ukuthi konke okuzobukeka kuyodingeka kwenziwe kanjani esikhathini esizayo. Manje ikhabhinethi ikhetha amagama amnandi. UNgqongqoshe uKajsa Ollongren (Izindlu), isibonelo, uthi wonke umuntu ukhululekile ukuzikhethela ukuthi bafuna ukwenzani ekhaya. ,, Abantu abafuna ukwenza izinguquko ezincane bangathola iseluleko ngalokhu esikhathini esifushane. Kungenzeka ukuthi ungakwazi ukulungisa ibheyili yakho kangcono kakhulu. "
U-Ollongren uqaphele kakhulu ngesibhamu esikhulu abanikazi bendawo okufanele bathathe - ngokufaka izindlu zabo emisebeni noma ngokususa igesi. ,, Ingabe uphahla lwakho aluhambisani kahle? Khona-ke kungenzeka ukuthi uthole insizakalo yalokho. "" Kodwa kungakanani ukuxhaswa futhi ngaphansi kwemiphi imibandela kusekhona uphawu lombuzo.
Kuyacaca ukuthi kuzoba khona isikhwama sokushisa sikazwelonke lapho abantu bengakwazi ukuboleka khona ku-euro engu-25.000 ukwenza ikhaya labo lihlale liqhubeka njalo. Noma ubani ongafuni ukuboleka imali enjalo noma ukukhokhela lokhu kutshalwa kwezimali esikhwameni sakhe, uzobe esebenzisa okuningi izindleko zamandla ngenxa yentela yegesi ekhulayo eminyakeni embalwa.
Noma kunjalo kubonakala kuhlakaniphile ukulinda kuze kube sekupheleni kwe-2021 ngokulungiswa okukhulu. Khona-ke bonke omasipala kumele benze uhlelo lokunikezwa kwamandla ezindaweni eziseduze. Amanethiwekhi atshisayo azofakwa emadolobheni amakhulu ikakhulukazi. Kuzo izindlu ezixhunywe kuyo, ibhuyili lingashiya indlu. "Awudingi lutho okwamanje," kusho u-Ollongren.
Ngakho-ke isigaba sokuqala sisho ukuthi intengo yegesi iyaqhubeka futhi ugesi iba yabiza. Uma siyiqiniso lokhu kusho ukuthi kufanele uvuselele ukuze uguqule kusuka kumagesi kagesi uze ugesi. Lokhu okubiza imali nakanjani futhi uma, isibonelo, igesi iphakama i-90% negesi iwela i-1% kuphela, awuzange uqambe njengesikhonzi, kodwa wonke umuntu olinganiselwe ulahlekelwa ngaphezulu. Uma, ngaphezu kwalokho, ukusebenza kahle kukagesi, njengesibonelo, ukushisa indlu kuyancipha, ngakho-ke kuyodingeka uthenge ugesi oluthe xaxa futhi kubhalansi uzolahlekelwa ngaphezulu.
Isigaba sesibili siqukethe isifungo sokuqasha umxhumanisi ozohlola indlu yakho izinguquko ezidingekayo. Ungasho ukuthi lokhu kuzodala imali nokuthi kuzomelwe ukuba nombiko onjalo osemthethweni ukhishwe. Irejista ye-Cash!
Esigabeni sesithathu, indwangu yokuphuma kwegazi isivele inikezwa ngendlela yesibonelelo okufanele sizimisele. Kodwa-ke, sesingacabanga ukuthi leyo nsizakalo izothatha ingxenye yezindleko zezinguquko okumele uzisebenzise (ngemuva kokuqasha umxhumanisi wamandla okugunyazayo ozobeka ezinye izinguquko ezigunyazayo kuwe).
Ngemuva kwaloko, imali enkulu yentela igcinwe isikhwama sikazwelonke sokufudumala lapho abantu bengakwazi ukuboleka khona imali ukuze baqalise lezi zinguquko ezifakiwe. Yilokho, kuyoba yikhokhwa ngesilinganiso esithile senzalo, futhi yile ndlela abantu abaphonswa ngayo emikhanda yabo: "Akudingeki ushintshe, kodwa intela yakho izokhula kakhulu. Uma ufuna ukushintsha, kufanele ube nombiko osemthethweni olungiselelwe futhi ungathola imali eyisibonelelo esincane, kodwa ngaphezu kwakho konke ukuboleka imali eningi". Ngamafuphi, abantu baphoqeleka ukuba bakhokhele isikweletu esengeziwe futhi kufanele bakhokhe ngakwesobunxele noma kwesokudla. Ngobani Ngesixuku.
Endaweni yokushayela, konke kwenziwa okubizayo futhi kushintshiwe. Vele ufunde okwesikhashana:
Uhulumeni angathanda amaDashi ukuba ashintshe izimoto kagesi. Lokho kungase kube yisandla sesibili, lapho kunezinhlelo zokuxhaso ezihle. Esikhathini sokuqala kwesimo sezulu, ukuxhaswa kokuthengwa kwe-6000 euros kuzosebenza ezimotweni ezintsha, kepha leyo malikelo ikhanseliwe.
Insizakalo entsha yokuthenga 'kufanele isinqunywe', njengoba Isivumelwano Sezulu Sezulu sesisho manje. Ngamafuphi: abantu abafuna ukuthenga imoto ye-plug-in eminyakeni ezayo, abazi kahle ukuthi lokhu kungenziwa yini. Ukuthi inani lizobe liphansi kakhulu kune-6000 euros, kubonakala sengathi liqinisekile.
Nalapha, uhulumeni uthi abantu baseDutch abaphoqelekile ukuba bachithe imoto yabo yephethiloli noma idizili. Cha, akudingekile, kodwa kubiza abanye abashayeli ngemali eyengeziwe. Ngoba umsebenzi we-excise kwi-diesel uzokwandiswa isinyathelo ngesinyathelo eminyakeni emithathu ezayo.
Insizakalo entsha yokuthenga ishiwo ngokucacile. Ngamafuphi: "awukwazi ukuthi yini oyitholayo ukuthenga imoto enjalo, kodwa kuba yinto evumelekile". Yebo, usenakho ukukhetha ukushayela uphethiloli noma idizili, kodwa uhamba nje kuhle okuningi ukhokha ngaphezulu. Yiqiniso, ukukhokha okuningi kuyenzeka "ezinyathelweni", sonke esingacabanga ukuthi ngokusebenza kuyoba amabhuthithi ama-mile ayisikhombisa.
Ngamafuphi, uye wadlala kakhulu nge-CO2 yesimo sezulu esiphezulu ngonyaka odlule ngesinye isizathu esicacile: Ukwakha i-alibi ukuze ukwazi ukweba imali eyengeziwe kubantu.
Kuyaphawuleka ukuthi isimemezelo sesivumelwane sezulu seza ngesonto ukuthi izinsuku eziningi ezishisayo zikaJuni zikhulunywe isikhathi eside kulo lonke elaseYurophu. Ngeke sixoxe ngobuchwepheshe obudingekayo ukuze kuthonye isimo sezulu. Iningi labo alikho, ngaphansi kwesimo sokuthi 'izinkolelo zezinhloso'.
Uphi ubufakazi obubonisa ukuthi umphumela omuhle wazo zonke izinguquko zamandla? Isibonelo, ukukhiqizwa kwamabhethri ngezimoto zikagesi kuyinhlekelele enkulu yemvelo, futhi kunezinkinga eziningi zokusebenza kahle ezihlobene nokushintshwa kwegesi kuya kagesi. Futhi yimuphi umthelela wezemvelo wokukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zokufakelwa izinto zokufakelwa?
Siphinde sibona isibonelo esihle kakhulu 'Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo', lapho inkinga eyakhelwe yilabo abezindaba kanye nezombusazwe ixhunyiwe; ukusabela phakathi kwabantu kubangelwa umshini ofanayo we-propaganda; ukuze ususe isisombululo (esibizayo kakhulu) emphinjeni wabantu.
I-CO2 iyisici esibalulekile emkhathini esetshenziswa izihlahla nezitshalo ukwenza oksijeni. Kuyinto encane emkhathini ongenabungozi futhi i-CO2 ukwanda kwamanani amanani aziwa (kusukela esikhathini esifushane ukuthi lezi zilinganiso zenzeka), kunalokho umphumela we umsebenzi we-solar owandisiwe kunesizathu ukufudumala kwezwe. Ungathola lokhu ngokwenza ucwaningo oludingekile. Kodwa-ke, i-intanethi igcwele kakhulu izintandokazi ezenziwe ngamabomu ukuthi abezindaba bazama ukukunqoba ngokuzethemba okungamanga kwezindaba ezikhohlisayo kanye nokukholelwa ukuthi basakhuluma iqiniso. Ukuphikisana okulawulwayo manje kuyisetha lokuphepha. Lapho izinhlanzi sezikhuphuka emkhunjini wokuphepha wokuphikisana, lo mkhumbi usukuma futhi abantu abagcobayo baphuthunyiswa emuva emaphephandabeni ajwayelekile kanye nokuhlelwa kwezombusazwe.
Ngakho uma uthukuthele ngemilayezo enjengeyodwa ngesivumelwano sezulu, khumbula ukuthi akufanele usalindele ukuthi ushintsho luvela phezulu. Amagundane abaphangi e-The Hague naseBrussels awakhona ukukusiza. Badlala kuphela ukubukeka kwentando yeningi, ngokusebenzisa umdlalo wesobunxele nongakwesokudla, oqaphele nokuphikisana. Ngakho kufanele wenze ushintsho ngokwakho futhi uthathe isenzo. Funda lapha kanjani.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: ad.nl
Amathegi: afakiwe, Kasje, isivumelwano sezulu, ukuboleka, mboleko, uNgqongqoshe, isizwe, Ollongren, isikhwama sokushisa
29 Juni 2019 ku-13: 20
Uma ngabe ngilalele ukukhohlisa, singase siqale ukukhokha intela bese siboleka imali yentela ehokhelwe, imisindo ye-hmmm enengqondo noma kunjalo.
Ukungazi lutho ukuthi yena kanye nekhabhinethi bathola i-crazier njalo ngesonto. Uma ucabanga ukuthi uzwile konke, benze okuthile okusha.
Ngaphezu kwalokho, izimoto zikahulumeni lapho zivunyelwe ukushayela sezivele zisebenza kagesi ngokuphelele, ingabe indlu yabo yenziwe isimo sezulu ku-finesse?
29 Juni 2019 ku-13: 53
Ngokuphumula komthetho we-euthanasia singanciphisa kakhulu ukukhishwa kwe-CO2. Futhi ngenxa yomthetho we-D666 ekuvuneni izidakamizwa, kubuye kube nokusimama, izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa.
29 Juni 2019 ku-14: 00
.. usucele i-Sarco ukuba ihlanganyele endaweni engcono, ngoba indawo engcono iqala kuwe
"Lapho ungasakaza khona ngokuthula kunoma iyiphi indawo"
29 Juni 2019 ku-16: 15
I-ajenda enhle kakhulu yi-ajenda yokudonswa kwe-disguised ngaphansi kwesimo sokuthi 'ukulondolozwa kwemvelo', kodwa yebo, hamba futhi uchaze lokho kumhlali ohlala madurodam ..
29 Juni 2019 ku-18: 05
Ngisho noma uyichaza, abantu abavamile ngeke bakholwe. Lokho kuyisinqumo esihle sabo!
Ah, namuhla bahlezi ogwini kule sezulu efudumele. Ilanga likhanya, ubhiya buyabizi, ihlobo seliqalile. Amadoda, abesifazane njll bangazingela.
Ubani ohlala khona .. Oh uma nje u-immigrant 'elite' onobudlova eshisa kancane epanini, abantu abavamile bayaqhubeka bejula kuyo.
Isivumelwane sezulu ngesimo sezokuhweba esifihlekile ngoba amazwe ampofu ase-EU nawo kufanele abambe iqhaza futhi umbuzo uwukuthi bangawukhokhela yini. Ngakho empeleni yizilinganiso ze-ISO. Hlala ubude budlelwane 'bekhululekile' phakathi kwamazwe e-EU, i-quod ayikho ngenxa yokuthi ayikho.
29 Juni 2019 ku-19: 56
Futhi futhi futhi uPatrick Moore ophikisanayo ophikisayo, phansi kokubili, uqala ukubeka i-LHBTQ Ilogo Greenpeace kanye nabanyathelisi abathile abanohlaza, bese kamuva eqhuba ukuphikisana okulawulwayo ngokumelene noGreenpeace, ukuthi lokhu kwenziwe kanjani ngobuqili ngobuqili.
UPatrick Moore uhamba kahle emsebenzini ophikisayo wokuphikiswa
Futhi lapha isiJalimane esasiqamba amanga wonke umuntu nge logo yakhe,
Kuyinto ajenda kancane ende esiyibonayo evula lapha.
29 Juni 2019 ku-22: 19
Yebo, "isiJalimane". Yilokho ubuzwe babo obubi.
29 Juni 2019 ku-23: 08
I-logo ye-rainbow yinkomba engaqondile ngqo kwi-kabbalah, inkululeko / iminyaka entsha njll. Ngakho-ke imfundiso yaseBabiloni yamaJuda eyimfihlakalo eqhubezela wonke umuntu emhlabeni jikelele.
Kabbalah kanye nokuzindla kwezizwe
29 Juni 2019 ku-23: 15
I-rainbow yokuqala eqoshiwe yendaba yaseBhayibhelini kaNowa, owasinda emkhunjini owabhubhisa abantu emhlabeni ngenxa yeziphambeko zawo. U-rainbow - "u-rainbow wami emafwini" - ukhonza njengesivumelwano phakathi kukaGd "nayo yonke imiphefumulo ephilayo," ekhumbuza iGd sesithembiso sakhe emva kokuba umkhukula ungabhubhisi umhlaba futhi, naphezu kwezono zawo. Kungani umlotha? Yini eyingqayizivele ngomcolo owenza kube uphawu lokuthula?
isenzo esiphikisana nomthetho, umthetho, noma ikhodi yokuziphatha; icala.
Ngizobe ngigcina iso ukuze ngithole iziphambeko ezengeziwe (uphawu lwamehlo)
Ngakho-ke i-agenda ye-LGBTQ yingxenye yecala "Ukuhlengwa ngesono"
30 Juni 2019 ku-14: 44
Lapha umbhalo ongcono kangcono mayelana nezwe labasolwa abajwayelekile nokuthi lihlangene kanjani nobukhosi.
30 Juni 2019 ku-16: 33
Wachaza umuzwa wecala ..
30 Juni 2019 ku-16: 43
7 July 2019 ku-11: 23
I-Dutch eyimnyama ithola nini isinxephezelo esiphelele sokugqilazwa okwenziwe ngabafana besikripthi? Kuyiqiniso ngenkathi abafana beskripthi bengesiyabantu abavamile. Ngabe ummeli ovela kwamanye amazwe omelela amabhola ukuze alwe naleso sinxephezelo ngenxa yokuphulwa kwamalungelo esintu, akukho mshini noma abafana be-script baqinisekisa ukuthi ijaji labafana besikripthi licacisa lokho. Lo mmeli wase-immigrant uzobuya ngeshwa ukuthi angasuki, esaba ukwesulwa komthetho wabameli. Futhi isimo sibaluleke nakakhulu kuye kunokuba enze into efanele.
"Inkolelo" yukuthi inzalo yabafana abavela kulo mqulu ibonakala njengabadlali beDutch eyimnyama. Yebo Badlala smart Baqala ukugqilaza futhi bazuze kahle futhi manje njengoba okuthiwa 'abavikeli'. Uhlala ubona leli qhinga liboniswa kuzo zonke izinqubomgomo eMadurodam. Futhi abantu abavamile bathatha leyo midlalo embi.
30 Juni 2019 ku-17: 28
Isihloko esihle kakhulu, nazo zonke izinyathelo ze-CO2 ukukhishwa akuncishiswa nhlobo kodwa kudluliselwe kwamanye amazwe afana ne-China. Akekho okhuluma mayelana nokukhishwa okungaphezulu kwe-CO2 ekukhiqizeni izimoto kagesi, akekho okhuluma ngomuthi owehla ngenxa yezitshalo ze-biomass. Ngokuqinisekile bakhiqiza i- CO2, kodwa lokho akufakiwe.
Futhi-ke asisakhulumi ngokusebenza komjikelezo wonke.
Muva nje ngangimatasa ngokufakwa komzimba kagesi okumelwe ukulungele ukuguqulwa kwamandla. Awufuni ukwazi ukuthi imali emele ukuma ikhuphuka uma ufuna i-3x 40Ampere esikhundleni se-25A,
Noma ubani obala konke futhi ucabange konke uzothola ukuthi ukukhishwa kwe-CO2 kwanda kunokuba kunciphise, ngakho-ke isivumelwano sezulu asinakukholwa.
Inzuzo kuphela yezinyathelo ukugqugquzelwa komnotho, okungenasetshenziswa izakhamuzi ezivamile.
1 July 2019 ku-00: 33
Futhi ucabange ukuthi eJalimane naseFrance uzothola insizakalo uma ushintsha igesi. Bese-ke babe negesi ehlukile lapho? Ngakwesokudla ...
Futhi ... ngaphandle kwegesi e-Netherlands, ingabe nabo bayoyeka ukubhoboza eGroningen noma ngeke yini bakhiphe ngokwanele?
Isiphetho: abantu abambalwa abacebile kakhulu futhi isixuku sizokhokha ...
5 July 2019 ku-14: 58
Coco Flannel wabhala:
24 July 2019 ku-18: 19
Ukugcwalisa izikhwama ezingeni lamaDashi empeleni akuyona umgomo wokugcina. Lesi yisilingo esinikezwayo ukuze osomabhizinisi baphendule futhi ngaleyo ndlela baqinise inkolo yesimo sezulu futhi basakaze kabanzi phakathi kwabantu futhi ikakhulukazi isizukulwane esisha. Abezombusazwe abangamaDashi nabo bancane kakhulu, okuyingxenye engezansi yesonto lesimo sezulu emhlabeni, elinamakholwa amaningi aqotho.
Umgomo osezingeni eliphakeme (kude kakhulu nezwe elimfushane laseNetherlands) ukuguqula imiphakathi emhlabeni wonke ngokushesha okukhulu, ukuyiguqula ibe yimiphakathi elawulwa ubuchwepheshe, ehlanganisa oopopu abanciphiswe ubuchwepheshe ('' thina sikudicilele phansi 'ubuchwepheshe kanye ne-aesthetics iyahambisana ngama-aesthetics we-tech-dictated okumele ayenge). Lokhu kusekela imali enkulu yangempela, amandla angempela.
25 July 2019 ku-10: 55
Ngiyabonga kakhulu ngencwadi yokuncoma.
Futhi ngokwesimo sezinhlangano ezilukhuni, nansi enye ingxenye enhle ye-siwilliamism eLondon
Ngabe zonke lezi zinhlangano zivelaphi ngokuzumayo
24 July 2019 ku-18: 40
Ngincoma incwadi kaNikos Salingaros ethi Anti-architecture (kukhona nenguqulo yamahhala kwenye indawo kwi-inthanethi), le yinkambu yokudlala yamandla ngobuhle. Isonto lesimo sezulu lingasohlangothini lwe-eco ideism / isimilo, ubuhle bezinzwa, ubuhle obukhiqizwe yi-tech kungenye indima enkulu yokudlala yamandla, engagcini ngokwakhiwa, kepha ukwakhiwa kuyisisekelo futhi kubiquitous (bona isonto lesimanje, i-neo-modernism / post-modernism and deconstructivism) ngakho-ke izindlela zezimpawu zamandla nezindlela zokuthonya nokulawula ingqondo yomuntu ...
Isonto lesimo sezulu lifisa isimilo nokusinda, i-aesthetics iyindlela yokuyenga, izindlela ezinamandla kakhulu, ngakho-ke kumele isetshenziswe kakhulu kuzo zonke izindawo ezingakhona.
« I-Deepfakes iyini nokuthi isikhathi eside kangakanani leso senzakalo sasizungezile?
Ubugebengu yi-alibi ekahle ekuqedeni ukheshi nokulawula okuphelele kwabantu »
Ukuvakashelwa okuphelele: 49.245